Obbolaan durbaa Sawud Arabiyaa: Niiwuu Yoork laga qarqaratti du'aanii argaman hiibboo ta'ee jira - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, NYPD
Taalaa Faariaa waggaa 16, fi Rotaanaa Faari'aa waggaa 22
Poolisiin Niiwuu Yoork du'aatii obbolaan durbaa Sawudii reeffi isaanii walitti hidhamee torban darbe Laga Haadsan qarqaratti argame qorachaa jira.
Taalaa Faariaa waggaa 16, fi Rotaanaa Faari'aa waggaa 22 kan ta'an obbolaan durbaa kun fuulli isaanii akkuma walitti gara galeen uffataan maramanii du'aan isaanii argameera. Qaama isaaniirra garuu mallattoon miidhaa irra hin jiru jedha poolisiin. .
Qorattoonni akka jedhanitti yakka ajjeechaatu raawwatameefi ofiin of ajjeesan jedhanii dubbachuudhaaf yeroon hin geenye. .
Ijoolleen durbaa kunneen dhiyeenya Ameerikaatti kolu galtummaa gaafachaa jiru, jedha poolisiin.
Saawudi Arabiyaan ambaasaadara Kaanaadaa ari'atte
Akka aanga'oota Ameerikaatti ,ijoolleen durbaa Faari'aa kun bara 2015 ture Sawud Arabiyaarraa gara Ameerikaa deemanii Virijiiniyaa bakka Feerfaaksi jedhamu turan.
Garuu akka qorattoonni jedhanitti naannoo kiiloomeetira 400 mana maatii isaaniirraa fagaatanii du'aan isaanii laga kana qarqaratti argame "gaaffiidha" jedhan.
Qondaalli Qoontsilaa Sawudii ibsa isaa keessatti akka jedheetti aanga'oonni imbaasii maatii isaanii dubbisaniiru, ijoolleen durbaa obbolaa kun barattoota turan, " obboleessa isaanii gara Waashingiteenitti gaggeessaa turan" jedheera.
Associated Press poolisii Niiwuu Yoork heeruudhaan, reeffi isaanii osoo hin argamiin dura guyyaa tokko dursee, haati isaanii aanga'aaa imbaasii Sawudii tokko irraa bilbilameefii maatiin isaanii akka gaddi dhiisanii ba'an ajajamanii turan, sababiin isaas ijoolleen durbaa kun kolu galtummaa waan gaafataniif jecha.
Ijoolleen durbaa kunneen Roobii darbe kan akkuma kaalsiifi jaakkeettii gurraacha uffataniin mudhiifi miilli isaanii walitti hidhamee du'aan isaanii qarqara laga bishaan sanaatti kan argaman.
Fakii ijoollee durbaa lamaan poolisiin gadi dhiise
Jalqaba irratti poolisiin ijoolleen durbaa kun riqicha Joorji Waashingiteen irraa kufan kan jedhu shakkii qabu dubbatee ture erga qaama isaaniirraa miidhama tokkollee dhabeen booda shakkii sana kaaseera.
Erga fakii obbolaan durabaa bocame gadi dhiisee, jireenya isaanii Niiwuu Yoork keessatti maal akka fakkaatu baruudhaaf gargaarsa uummataa gaafachaa jira.
Ibsa gaazexaa Roobii darbe kennameen, qorataan yakkaa ol-aanaa magaalichaa seenaa obbolaan durbaa kana keessa "qaawwii" ta'e jira, kanammoo qorattoonni furuudhaaf yaalii gochaa jiru.
"Kanan sirriitti ofitti amanu yeroo qorannichi xumuramutti, maaltu akka ta'e isa sirrii isaa baruuf jirra" jechuun dubbate qorataan yakkaa Dermoot Shi'aa.
Dubartiin lammii Ameerikaa sarootuma guddifteen ajjeefamushee poolisiin beeksise
Miseensonni TPLF hidhaa jiran 'himannaan nurratti dhiyaate kan siiyaasaati' jedhan
Baqattoonni Itoophiyaa Yaman jiran hiriira ba'uun waa'ee namoota dhumanii gaafatan
'Rakkoo dheessanii filannoo keessaa ba'uun furmaata miti'- Badhaadhina
Hiriira guyyaa dubortootaa Meeksikoo irratti poolisii fi hiriirtonni walitti bu'an
Hoogganaan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eel eenyu?